ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၂-၆-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၂-၆-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း)
- သာပေါင်း လယ်သမားတွေ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲ click
- လှည်းကူးက လယ်သမားတွေ ရှင်းလင်းပွဲလုပ် click
- ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်က မြေသိမ်းခံလယ်သမားများ (ရုပ်သံ) click
- လယ်ယာကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အမေရိကန်ပညာရှင်တွေ အကြံပြုဆွေးနွေး click
- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးနိုင်ခြေ အခွင့်အလမ်း (ရုပ်သံ) click
- ဖားကန့် မြေပြိုမှု ၃ ဦး သေ၊ ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ပြန်နိုင်ရေး အစိုးရ တာဝန်ရှိကြောင်း ဦးအောင်မင်း ပြော click
- ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် click
- မြန်မာဒုက္ခသည် နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး (ရုပ်သံ) click
- မြေနီကုန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ် click
- ၈၈ မျိုးဆက်တွေ အိုင်ယာလန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာ click
- ၈၈ မျိုးဆက်ရဲ့ မြောက်ပိုင်း အိုင်ယာလန်ခရီး click
- ၈၈ မျိုးဆက်တွေ ဘီဘီစီ မီဒီယာနဲ့ တွေ့ click
- တိုင်းမ်းဂ္ဂဇင်း စွပ်စွဲချက် ဦးဝီရသူ ပယ်ချ click
- တိုင်းမ်စ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး ဆရာတော် ဦးဝီရသူ လက်မခံ click
- TIME မဂ္ဂဇင်း ရေးသားချက် ပြည်ပရောက် ဘုန်းတော်ကြီးတချို့ ပယ်ချ click
- ညီမလေးက ဘုန်းကြီးကို ဘင်လာဒင်နဲ့ နှိုင်းစရာတဲ့လား - အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၂၃) click
- ပဋိပက္ခတွေမှာ အစိုးရဲ့ အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးညွန့်မောင်ရှိန်နဲ့ မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလမ်သာသနာရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်မောင်ရှိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ) click
- စာနယ်ဇင်းနဲ့ ရေဒီယို တီဗွီ ပိုင်ဆိုင်မှု (သုံးသပ်ချက်) click
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – အပုိုင်း (၂၅) click
- အမေရိကန်ရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေချနေထိုင်မှုဘ၀ click
- အမျိုးသမီးသုံးယောက်မှာ တယောက်နှုန်းနဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရ click
- ILO ကန့်သတ်ချက်အားလုံး ရုပ်သိမ်းမှု မြန်မာ ကြိုဆို click
- ဗြိတိန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ) click
- တရားမဝင် ငွေလွှဲမှုနဲ့ ဂျပန် တိုကျို မစ်ဆူဘီရှီ UFJ ဘဏ် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရ click
- ကလေးမှာ နောက်ထပ် ရဲနှစ်ဦး အရေးယူခံရ click
- မွန်ပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ ကြီးထွား click
- ကုသိုလ်တော် ကျောက်စာ ကုလ အသိအမှတ်ပြု click
- သေခါနီးလေ . . . ပျော်စရာကောင်းလေ click
- လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီး၏ ဘဝနှင့်စာပေ (ဆောင်းပါး) click
- ရွှေမန်းပြန်ရင် လိုက်သွားကြ (ကဗျာ) click
- ရှု့ထောင့်နဲ့ ရိုက်လင်းတန်းများ (ကဗျာ) click
- ရှုပ်လေ ကြိုက်လေ (ကာတွန်း) click
- မကြိုက်ရင် ပြင်ပေးမယ် (ကာတွန်း) click
- မြန်မာဝန်ကြီးတွေ မညံ့ပါ (ကာတွန်း) click
- အမေရိကန်-တာလီဘန် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆွေးနွေးမည် click
- ဘရာဇီးသမ္မတ တိုင်းပြည်ကို မိန့်ခွန်း ပြော click
- ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ဘရာဇီးသမ္မတ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ စည်းဝေးပွဲခေါ် click
- တရုတ်ကလေးငယ် ငါးထပ်က ပြုတ်ကျပေမယ့် မသေ click
- အိန္ဒိယမှာ ရေကြီးလို့ လူ ၅၀၀ ကျော် သေဆုံး click
- မီးခိုးမြူ တားဆီးနိုင်အောင် အင်ဒိုနီးရှားတောမီး ငြိမ်းသတ် click
- လျှပ်စစ်ကား တကြိမ်အားဖြည့်ရုံနဲ မိုင် ၂၀၀ ကျော် မောင်းနှင်နိုင် click
- ဥက္ကာပျံတွေကို ထိန်းမယ့် NASA ရဲ့ အစီအစဉ် (ရုပ်သံ) click
I have seen many photo of Ven. Wirathu before, but never seen such kind of ugly cover photo of Time July issue.
It was funny, just an image but big impact upon readers who did not know about Buddhism basically.
Media know this concept.
Now,we accept that Time magazine is driven by the Islamic association as mastermind.
They do it unfair news and published without dignity, without media ethic.